Ongororo pfupi ye "Hopscotch" naJulio Cortázar | Zvazvino Zvinyorwa
Ongororo pfupi ye «Hopscotch» naJulio Cortázar
Carmen Guillen | | Updated on 01/02/2021 13:10 | Mabhuku, Literature
Mudiki pane vese akaverenga chinyorwa ichi vane chokwadi kuti uri kufunga nezvazvo "Hopscotch", iro basa rakakosha re Julio CortazarKufanana neiro bhuku "tostón" rinotumirwa nevadzidzisi veMabhuku pane imwe nguva muchikoro. Avo vedu vakatopfuura izvo, verenga zvinosungirwa "Hopscotch" mumazuva edu ehudiki uyezve taverenga zvakare (zvirokwazvo kune vazhinji vedu, ndinozvibatanidza pachangu) makore mashoma gare gare, takaona kwete chete kukosha kwebhuku iri munhoroondo yezvinyorwa asiwo zvakasiyana sei neruzhinji.
"Hopscotch", rakabudiswa mu 1963, Chirevo chakakosha chezvinyorwa zveAmerican American. Yake yakasununguka kuteedzana chimiro inobvumira kuverenga kwakasiyana, uye nekudaro, kuturikira kwakasiyana. Nenzira iyi yekuverenga, zvaidaidzwa naJulio Cortázar inomiririra nyonganiso, mukana wehupenyu uye nehukama husingarambiki pakati pezvakasikwa neruoko rwemhizha anozvigadzira.
Kana usati waverenga "Hopscotch" uye urikufunga kuzviita, mira apa, usaenderere mberi kuverenga ... Kana usiri kuronga kuiverenga, mirawo, ndinokukurudzira kuti udaro ... Ukangoipedza, dzokera unoverenga chero chaunowana kuda ... Asi iyo chaiyo nyaya yakanyorwa naJulio Cortázar.
1 Kuongorora «Hopscotch»
1.1 Kutanga bhuku
1.1.1 "Kudivi uko"
1.1.2 "Padivi apa"
1.2 Chechipiri bhuku
1.2.1 Kubva kune mamwe mativi
1.3 Changu Chandinoda Chitsauko: Chitsauko 7: The Kiss
2 Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve iro bhuku "Hopscotch"
2.1 Ndiani protagonist weHopscotch?
2.2 N'anga ndiani?
2.3 Anonzi ani mwanakomana wemuroyi?
2.4 Ndeupi murume wechikadzi Cortázar?
Tisati tataura kuti ibasa rakasiyana nemamwe nekuti mune iri zvinoreva kutora chikamu kwekushingaira kwemuverengi. Kuverengwa kuviri kwebhuku kunoitwa pane bhodhi revatungamiriri (sekureva kunoita zita rayo, mutambo chaiwo wehopscotch uyo isu tese takatamba pane imwe nguva). Rudzi urwu rwechimiro rwakaputswa nezvose zvakagadzwa kusvika pari zvino maererano nemabhuku.
Bhuku rekutanga ra "Hopscotch" tichaiverenga mune mutsara wakarongeka, inoguma muchitsauko 56. Yakagadzirwa Zvikamu zviviri: "Kudivi uko" y "Padivi apa". Mune zvese zviri zviviri, zano rakakosha kana nyaya yebhuku inoratidzwa.
Horacio Oliveira anoshanda semuturikiri muParis. Ikoko akatanga iyo Kirabhu nedzimwe shamwari, kwaanouraya nguva achitaura kana kuteerera mimhanzi yejazz. Ane hukama hune rudo naLucía, la Maga, wekuUruguay uyo ari amai vemwana waanodaidza kuti Rocamadour. Zvisinei, hukama hwakasiyana pakati pevaviri hunodzikira. Mune mumwe wemisangano yavo, Rocamadour anodonha akafa kamwe kamwe uye, semhedzisiro, Lucía anonyangarika uye anosiya mitsara mishoma yakanyorwa.
"Kudivi uko"Mune mamwe mazwi, chikamu chekutanga ichi chinopera nemufananidzo wehopscotch, tambo yakajairika mubhuku rese inomiririra kutsvaga kwechiyero (denga).
Kuita kweichi chikamu chebhuku kunoitika muguta reBuenos Aires. Asati asvika pano, Oliveira anotsvaga La Maga muMontevideo. Kudzoka nechikepe kuenda kuArgentina, anomukanganisa kune mumwe mukadzi.
MuArgentina, anodzokera kune hushamwari hwake neMufambi uye anosangana nemukadzi wake, Talita, uyo anomuyeuchidza nezveLa Maga kubva panguva yekutanga. Iye achashanda nevaviri ava musikisi uye mukiriniki yevarwere vepfungwa. Asi Oliveira anokurirwa nezviratidzo zvinofambira mberi zvekusaenzana kwepfungwa. Kuvhiringidzika kwake kunoita kuti afunge kuti anoona La Maga nguva dzese pachinzvimbo chaTalita. Izvi zvinotungamira kune dambudziko rinoita kuti iwe ufunge nezvekuzviuraya. Iye anoedza kuzviuraya asi pakupedzisira Mufambi naTalita vanomudzivirira kubva pakuwa kubva pakutengesa kuenda kune patio uko hoopscotch yakapendwa.
Mubhuku repiri tine iyo yechipiri kuverenga imwe y inotanga muchitsauko 73. Mukukosha isu tichawana nyowani nyowani kune iyo nzvimbo, iyo "Zvitsauko zvinotsanangurwa", kune chimiro chechimiro chakatsanangurwa pakutanga mubhuku.
Kubva kune mamwe mativi
Aya matunhu anoita chiono chakadzama cheicho chaichoicho, umo kubatana kwakavanzika kunoratidzwa. Asi pamusoro pezvo, mavara akaita saMorelli anoonekwa, munyori wekare anoshandiswa nemunyori kufumura mamwe makiyi eHopscotch: yakavhurika, yakatsemuka, inokanganisa uye inotora chikamu izvo zvinoratidza nyonganiso yezvazviri asi hazvirayiri kana kuzvitsanangura.
Changu Chandinoda Chitsauko: Chitsauko 7: The Kiss
Ini ndinobata muromo wako, nemunwe ndinobata kumucheto kwemuromo wako, ndinoidhonza sekunge ichibuda kubva muruoko rwangu, sekunge kekutanga muromo wako uchinge wakajairika, uye zvakaringana kwandiri kuvhara maziso angu kugadzirisa zvese uye kutanga patsva, ndinoita muromo wandinoshuvira, muromo unosarudzwa neruoko rwangu uye unodhonzera kumeso kwako, muromo wakasarudzika pakati pevose, nerusununguko rwechangamire rwasarudzwa neni kuridhonza neruoko rwangu pachiso chako, uye kuti nemukana wekuti ini handitsvake kunzwisisa inowirirana chaizvo nemuromo wako uyo unonyemwerera pazasi peumwe ruoko rwangu unokwevera iwe.
Iwe unonditarisa, padhuze iwe unonditarisa, zvakanyanya uye zvakanyanya uye tobva tatamba ma cyclops, tinotarisa zvakanyanya uye zvakanyanya uye maziso edu anokura, vanoswedera padhuze neumwe, vanopindirana uye ma cyclops anotarisana , vachifema vakavhiringidzika, miromo yavo vanosangana uye vanorwa zvinodziya, vachirumwa nemiromo, vasingazorore rurimi rwavo pameno avo, vachitamba mumakomba avo umo mhepo inorema inouya ichienda nepefiyumu yekare uye nekunyarara. Ipapo maoko angu anotsvaga kunyura mukati mevhudzi rako, zvishoma nezvishoma uchipuruzira kudzika kwebvudzi rako apo isu tichitsvoda sekunge tine miromo yedu izere nemaruva kana hove, nemafambiro ane hupenyu, nekunhuhwirira kwakasviba. Uye kana tikazviruma isu marwadzo anotapira, uye kana tikanyura mune pfupi uye inotyisa kuyamwa panguva imwe chete yekufema, iko kufa kwekufa kwakanaka. Uye pane chete mate uye kuravira kumwe chete kwemichero yakaibva, uye ndinonzwa uchidedera kuzondirwisa semwedzi uri mumvura.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve iro bhuku "Hopscotch"
Ndiani protagonist weHopscotch?
Iye protagonist wenyaya ndiHoracio Oliveira. Iye murume weArgentina angangoita makore 40-45. Iye murume anoziva zvinhu zvakawanda uye akaenda kuParis kunodzidza asi zvakadaro haaverenge. Pane kudaro, anoshanda achibatsira kuronga tsamba.
Zvinozivikanwa kuti ane hama yake anogara kuArgentina. Uye kuti ndiye murume chaiye anoita kunge ari kugara achitsvaga chimwe chinhu (dzimwe nguva nekunzwa kuti atove nezvaanenge achitsvaga ...).
N'anga ndiLucia, mumwe protagonist wenyaya iyi. Iye zvakare anogara muParis, asi nyika yake yekuzvarwa ndiUruguay. Ane mwanakomana ane zita risinganzwisisike: Rocamadour. Kusiyana naHoracio, iye musikana asingazive zvakawanda nezve chero chinhu, izvo zvinoita kuti anzwe pane dzimwe nguva kusakoshesa kana chinhu chidiki padhuze nevamwe.
Iwo akasimba mapoinzi ayo ndeayo ane hunyoro hwakawanda uye naivety, chimwe chinhu chinowira murudo neziso rakashama uye icho zvakare chinovengwa nevamwe vamwe vechipiri vatambi vari munoverengeka. Horacio anochiva n'anga kugona kwake kubuda kuti ararame zviitiko zvitsva, kunyorova paanotamba uye kushinga.
Anonzi ani mwanakomana wemuroyi?
Sezvatakataura mundima yapfuura, mwanakomana wake anonzi Rocamadour asi zita rake chairo ndiFrancisco. Uyu mwana ane mwedzi-wekutanga uyo anotanga kuchengetwa naMadame Irene, mutariri. Mukupedzisira, mukomana anogara naLa Maga naHoracio, uye chiitiko chinokonzeresa chinoitika naye. Chokwadi ichi chikamu chakakosha cheruzivo.
Ndeupi murume wechikadzi Cortázar?
Uyu mubvunzo unokonzeresa "kukakavara" kukuru pakati pevatsoropodzi vezvinyorwa, nekuti basa rake rakaoma kupatsanura. Akanyora zvinyorwa, asiwo nhetembo; zvakadaro, Julio Cortázar anomiririra rake rehunyanzvi. Rudzi urwu nderwevanhu, avant-garde, uye nguva dzose "kutamba" pakati pezvakanaka nezvakanaka. Zvisinei neizvi, kune avo vachiri kungoomerera pakuiisa mune inozivikanwa Latin Latin Boom.
Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveLatin America
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Ongororo pfupi ye «Hopscotch» naJulio Cortázar
Kwakanaka chiratidzo chehopscotch, zvakanaka kwazvo, ini ndinokupa imwezve chidimbu cheruzivo kana uchida kuwedzera icho, chitsauko 62 chehopscotch inoenderera mubhuku, ndinoreva, ndiko kutanga kwebhuku rinonzi 62 ​​/ modhi Unganai, muno muBuenos Aires Tinoti rayuelita, ndinovimba kuti ruzivo urwu runokushandirai, sezvo hopscotch ine gaba kwechinguva.
Zvinoita kunge zvakanaka kwandiri nekuti ini ndoda kuverenga zvakanyanya uye izvi zvaive zvebasa uye ikozvino kana ndichigona kuita tsananguro nemazvo nekuti ndakaverenga bhuku rese ndatenda zvikuru.
Pindura kuna stefanny
Pindura kuna jes
Ndinoda kuziva kuti mune (counter) inoverengeka Holiveira anonzi muturikiri.
Carlos Garcia Garcia akadaro
Makore makumi matatu nemana mushure mekudyara kwayo, mudetembi wandakambosangana naye muVenezuela, ndiri mwana, sekutaura kwangu, ndinonyora chimwe chinhu hopscotch.
Hopscotch kana Kutsika.
Matanho ekutanga akatangwa kare
Torso inokotama, kuwirirana kwakakwana
Mukomana anosheedzera, yave nguva yangu!
Hupenyu chiratidzo, kasingaperi
Iwe unenge uine nyika dzako dzechiedza.
Ndakatsika, ndakatsika, nhamba yangu yemashiripiti
Hunza pasi redu padhuze pamwechete
Mwana mucheche mupfungwa dzangu ndiye
Kushuva kwehudiki, akasiya kusava nemhosva.
Tanga hupenyu hwako, hopscotch ndiwe
Pakupedzisira, zorora, zorora
Kufara, kwira kuchikoro
Tenzi wezvakavanzika zvedu
Anopurwa alifafes, kune kwakadzikadzika vanoenda
Mutsara wako kuenda kusingaperi unoenda
Carlos Garcia. 2016 (+1) / 31/10. Zuva repasi rese rekuimba netizen.
Pindura kuna carlos garcía garcía
ruzivo rwunoratidzwa haruna kurongeka zvakakwana, pfungwa dzakapihwa hadzina kujekesa uye zvipfupi, akawanda manotsi ekushomeka kuti anzwisise zvirinani
Anton Vea Campos (@Antonbvici) akadaro
MUBloggi RANGU NDINOSHANDISA KUPINDA VAYA VANYORI VANYORI VANODZIDZA KUTI VANOTI KANA PANE NENGUVA VANOGONA KUTI BHASIKO IONEKERE MUNYORO YAVO.
IYO ZVIMWE CHINOGONESESA CHIKONZERO (CHANDINOSHURE PANGUVA PAMWE CHETE) KUTI UVErenge BASA RESE KANA RAKAKWANA
YEMAHARA NGUVA NDINOONA HUCHO HWEBHAYIKI SEKUEDZWA KWEMUNYORI SENSITIVITY
CORTÁZAR ANAVO NAVAMWE VAKANAKA ZVAKANAKA
NDINOTENDA ZVAKANAKA ZVAKANAKA NENZVIMBO YAKO NOKURUDZIRA BHUKU
NDINOCHENGETA PICHA YEMABHASIKITI NAYE
NDICHACHITUNGAMIRA UYE NDICHAVAwo NEMIYEUKO YAKO
HAKUFANANIKE KUSHAYA KUNYANYA KANA NDICHIFANIRA KUPEDAL CHIMWE CHITSVA MURAYUELA MUNZVIMBO KANA MUHURGAR MUMAKRONOPI.
KANA MUMWE MUNHU AKADZIDZA ...
Pindura kuna Anton Vea Campos (@Antonbvici)
Cortazar anozivikanwa neFantastic Literature, kwete neMagic Realism !!
Sebastian castro akadaro
zvakanakisa chiono chehopscotch, zvakanaka kwazvo zvinoita senge kwandiri ibasa rakasiyana kubva kune vamwe nekuti mune izvi zvinoreva kutora chikamu kwemuverengi.
Pindura Sebastian Castro
Ichokwadi ndechekuti pandakaverenga Hopscotch yaiita kunge rakafuta uye rakanyanyisa bhuku. Iwe wakandipa kumonyoroka kune iyo pfungwa, kune iyo poindi yekuti ini ndiri kuenda kuiverenga zvakare netariro yekuwana iyo nyonganiso uye iyo cadence yavanotaura zvakanyanya nezvayo.
Yakanaka kwazvo saiti !!! Iko kushuvira kwemabhuku kunonzwika neavo vakagovana aya anotungamira mapeji. Iwe unonzwa rupo ...
Sei usinga zive Hopscotch, uye sei kusaziva Cortazar seimwe ye mbiru dzespanish-yekunyora nhoroondo. Ingori titani yemunda. Yakanaka chinyorwa.
Mabhuku akanakisa a2017 ausingakwanise kurega kuverenga